I-Indiya inyusa amandla eenqwelomoya ukuya kwi-85% yamanqanaba angaphambi kwe-COVID
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Indiya inyusa amandla eenqwelomoya ukuya kwi-85% yamanqanaba angaphambi kwe-COVID
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Indiya inyusa umthamo wayo wenqwelomoya ukuya kuma-85% yamanqanaba angaphambi kwe-COVID
Utshintsho olubhengezwe ngu-Mphathiswa Wezokundiza Kwabantu luza kuvumela abathwali beenqwelo moya baseIndiya ukuba basebenze ngakumbi kwiinqwelomoya kwaye bazonyusa imithwalo yabakhweli ngokuqala kweholide yesizwe kwinyanga ezayo.
Urhulumente wase-India uyayekisa izithintelo zexesha le-COVID kubathwali bomoya balapha ekhaya.
Iinqwelo-moya zaseIndiya ngoku ziya kuvunyelwa ukuba zisebenze kwiipesenti ezingama-85 zamandla ngaphambi kobhubhane.
Iinqwelo-moya zasekhaya zaseIndiya ziya kuvunyelwa ukuba zibeke eyazo imali yokuhlawula amatikiti ngaphaya kweentsuku ezili-15 zomhla wokubhukisha.
I-India yoMphathiswa Wezokundiza yaphakamisa ikepusi kumthamo womoya ophathwayo wasekhaya namhlanje, ivumela iinqwelomoya zaseIndiya ukuba zisebenze kuma-85% kumthamo wazo wangaphambi kwe-COVID-19 endaweni yangoku ye-72.5%.
Igunya lokundiza ngenqwelomoya laseIndiya libuye latshintsha nefomula yekepusi yamaxabiso, ivumela iinqwelomoya ukuba zibeke eyazo imali yamatikiti ngaphezulu kweentsuku ezilishumi elinesihlanu zomhla wokubhukisha.
Kude kube luhlengahlengiso lwanamhlanje, amaxabiso ekhaphethi ebesebenza kwiitikiti ukuya kwiintsuku ezingama-30 ukusuka kumhla wokubhukisha.
Utshintsho olubhengezwe ngu Icandelo loMphathiswa Wezoluntu izakuvumela abathwali bomoya baseIndiya ukuba basebenze ngakumbi kwiinqwelomoya kwaye bazonyusa imithwalo yabakhweli ngokuqala kweholide yesizwe kwinyanga ezayo.
Ukuhamba ngenqwelomoya kwasekhaya eIndiya kunyuse i-34% ukuya kwi-6.7 yezigidi ngo-Agasti ngokulandelelana ngokulandelelana emva kokunyuka komthamo ukuya kuma-72.5%.
Ukonyusa ugonyo kunye neemfuno zovavanyo ezikhululekileyo ze-COVID-19 nazo zincedile. Ukuhlala kwizihlalo ezibanzi kumzi mveliso kukhuphuke ngaphezulu kwama-70% kwinyanga ephelileyo.
Ukuyekiswa komthamo wenqwelomoya kunye nokunciphisa izithintelo zamaxabiso kuza emva kwemijikelo yothethathethwano phakathi kwe-Indian Ministry of Aviation Ministry kunye ne-CEO yeenqwelomoya zaseIndiya.
Ukufudukela kumthamo wokuthwala kunye nexabiso lokuhamba kwahlulahlulwe eli shishini ngo-Ronojoy Dutta, u-CEO wenqwelomoya enkulu yaseIndiya Indigo, ukubiza ukuba kususwe ukuphazamiseka kukarhulumente kwixabiso kunye nomthamo, esithi oku kuthintela iinqwelomoya ukuba zithathe izigqibo ezisekwe kurhwebo.
Abasebenza kwizikhululo zeenqwelo moya ezinkulu zelizwe — eDelhi, eMumbai, eBangalore - babongoze urhulumente ukuba aphelise izixokelelwano kumandla nangexabiso njengoko oku kuthintela ukubuya kwabakhweli kwaye kwenzakalisa kakubi ingeniso yezikhululo zeenqwelo moya zaseIndiya.